Iskuulada ayaa ka furmay Istanbul, Dhibaatada Gawaarida | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulIskuulada ayaa ka furmay Istanbul, Dhibaatada Gawaarida ma jirto
09 / 09 / 2019 34 Istanbul, Tareenka Tareenka, tareenka, Tariin, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka
iskuulada ku yaal istanbul ayaa furay isku socodka dadka
Magaalada Istanbul, ku dhawaad ​​ardayda 3 milyan iyo ku dhowaad hal kun oo macallimiin ah 200 ayaa sameeyay bilowga xiisadaha maanta. Magaalada ay ku sugan yihiin gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah, gaadiidleyda adeegga ayaa la siiyaa si ay waalidiinta ugu qaadaan. Muwaadiniinta, Madaxweynaha EkBB Ekrem İmamoğlu'nun ayaa wacaya iyagoo dhageysanaya gaadiidka dadweynaha ee la doorbido. Maalintii ugu horeysay ee iskuulka, ma jirin wax dhibaato ah oo taraafikada ama shilalka ah oo ka dhacay Istanbul.
Sababtoo ah furitaanka iskuulada, Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), Amniga iyo Gendarmerie waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen qaadashada taxadarka lagama maarmaanka ah si looga hortago taraafikada magaalada Istanbul maalinta koowaad ee sanadka cusub. Thanks to tilaabooyinka la qaaday iyo muwadiniinta reer Istanbul ee tixgalinaya isticmaalka gaadiidka dadweynaha ee Madaxweynaha IMM Ekrem İmamoğlu, ma jirin xoog weyn oo carqaladeeyay taraafikada. Waxaa la arkay in muwaadiniintu doorbidayaan gaadiidka dadweynaha lacag la’aan.
08: Laga bilaabo 50, waxaa jira cufnaanta qayb ahaan dhinaca jihada 15 July Martyrs Bridge iyo Buundada Fatih Sultan Mehmet ee kala guurka laga soo bilaabo dhanka Anatolian dhinaca Yurub. Munaasabadaha Maalinta Ashura ee Bahcelievler Halkalı Barxadda oo loo xiray waddooyinka Fatih iyo Zeynebiye sababtoo ah qayb ahaan cufnaanta Waddada 'Press Express', kooxaha waxaa laga qaadaa waddooyinka Dereboyu iyo Muammer Aksoy. Ilaa iyo hadda, cufnaanta taraafikada ee Istanbul waxay ku jirtaa heerka 40.
ISTANBUL TRAFFIC WAA MAAMULKA DHOM
Xawaaladda IOM, Maamulka, Booliska, Gendarmerie, maalinta koowaad ee iskuulku waxay isku dubaridayaan qulqulka taraafikada ee AKOM. Kaamirooyinka ayaa isha ku haya taraafikada magaalada iyo unugyada xannibay isla markiiba waxay soo faragelinayaan unugyada ay quseyso. Boliiska iyo kooxaha bileyska waxay ka shaqeeyaan iskuduwida wadada weyn iyo iskuulada degmooyinka. Iyaga oo wata gawaarida gawaarida ee 'EDS', ayaa kooxaha taraafikada rayidka waxay baaritaanno ku sameeyaan waddooyinka. Qeybta Booliska ee Gobolka 47, IMM 19 gawaarida jiida ayaa diyaar u ah jawaab deg deg ah oo ku saabsan shilalka waxyeelada leh ee dhici kara. Aaladaha macluumaadka dhijitaalka ah ee IMM iyo calaamadaha digniinta ee laalaaday isgoysyada ayaa ka caawiyay darawalada socodka socodka.
Gawaarida adeegeeda 17 ee ku taal magaalada Istanbul ayaa siisa fududeyn isticmaalka jardiinooyinka iskuulka inta lagu jiro rarida iyo dhigashada ardayda. Gawaarida gawaarida ee 118 SPARK ee ku wareegsan iskuullada waxay adeegyo lacag la’aan ah siiyaan gawaarida xamuulka maanta. Waalidiinta raba inay carruurtooda geeyaan dugsiga maalinta koowaad waxay wataan basaska dugsiga. Shaqooyinka ayaa lagu dhammeystirey goobihii ay gaadiidku saameyn ku yeelan lahaayeen, ama shaqada laga joojiyay dhowr maalmood sababo la xiriira furitaanka iskuulada.
2 Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul waxay u adeegtaa ku dhawaad ​​250 kun oo 1500 ah saraakiisha fulinta sharciga ee Istanbul oo dhan. 06 aroortii: Gaadiidka Dadweynaha oo ka bilaabanaya 00 oo bilaash ah ilaa 14: 00. Basaska, metrobus, nidaamka tareenka iyo safarada badda ayaa la kordhiyay. IETT, sababta oo ah furitaanka iskuulada ayaa dhaaftay jadwalka jiilaalka. 4 kun 139 safarro dheeri ah, oo lagu xaqiijiyey bas, metrobus, nidaamka tareenka iyo badda, ayaa abuuray awoodda 763 kun oo rakaab ah oo dheeraad ah. Kooxaha Iskuullada Mobilada ee Booliska waxay diyaar u yihiin dhammaan noocyada dhibaatooyinka nabadgelyada ee ka dhici kara dugsiga hortiisa iyo agagaarkiisa.
Semmester-kii ugu horreeyay ee sannad dugsiyeedka cusub ee 17 wuxuu dhammaan doonaa Janaayo 2020 Jimcaha. 18-22 waxaa la qabanayaa bisha Noofembar, 2019, iyo 20-31 waxaa la qaban doonaa bisha Janaayo 2020. Semmester-kii labaad ee 3 wuxuu bilaaban doonaa Febraayo 2020 Isniinta iyo 19 waxaa la dhameystiri doonaa bisha Juun illaa 2020 Jimcaha.
Maalintii ugu horeysay ee mercenaries ee kuyaala Akkaray wax dhibaato ah ma qabin
Saldhig Tababarka Dalaman
Dugsiyada oo furmay Metrobus Stop
Dibadbaxyada barafka ee Inter-School Skiing
Ka shaqeeya Horn Horn Bridge ayaa la dhammeeyaa inta aan la furin dugsiyada
Nidaamka gaadiidka cusub ee Izmir waa in la tirtiraa ka hor inta aan la furin dugsiyada
Iskuuladu waxay ahayd Dayuurad, Ka shaqeysiiyey Mashruuca Tareenka ee Konak
Duqa magaalada Tuna: "U ogolow in Iskuulada Iskoolada Kala Hore Laga Diyaariyo Dugsiyada Ka Hor
Akkaray Tram Line ayaa ku sii fidiya Aagga Dugsiyada
Dhibaatada Istanbul waa 3. Miyuu jiraa buundada?
10 Ganaaxa Marmaraylık ee 1 ee taraafikada
15 Bisha July Julyrs Bridge
Baarkinka ISPARK waa lacag la’aan
Gaadiidka Dadweynaha ee Istanbul oo bilaash ah
Iskuulada ayaa laga furay Istanbul
Kooxaha Amniga Dugsiga
Iskuulada ayaa la furay
Maalinta koowaad ee iskuulka
Yaxye Captain-yaasha Deggan Ma Doonayaan Xariiqa Tram